वाम एकतालाई निष्कर्षमा पु¥याउन आतुर छांै | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / अन्तर्वार्ता / वाम एकतालाई निष्कर्षमा पु¥याउन आतुर छांै
वाम एकतालाई निष्कर्षमा पु¥याउन आतुर छांै
Posted by: युगबोध in अन्तर्वार्ता October 18, 2017	0 171 Views
नेकपा एमाले दाङका अध्यक्ष
संविधानको कार्यान्वयनका लागि दे शमा प्रदे श र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुन लागिरहे को छ । दलहरुले समानुपातिक उम्मे दवारहरुको बन्दसूची निर्वाचन आयो गमा दर्ता गरिसके का छन् भने अब दलहरु मनो नयन दर्ताका लागि आवश्यक तयारीमा जुटिसके का छन् । आउ“दो मंसिर १० र २१ गते गरी दुई चरणमा निर्वाचन हुन लागिरहे को छ । जसरी निर्वाचन नजिकिदै छ दलहरुबीच धु्रवीकरणको प्रयास पनि भइरहे को छ । बाम शक्ति एकातिर र प्रजातान्त्रिक शक्ति अकोर् तिर ध्रुवीकरण हुने क्रम चलिरहे को बे ला दाङमा बाम ध्रुवीकरणको उत्साह र आगामी निर्वाचनको तयारीका सन्दर्भमा ने कपा एमाले का जिल्ला अध्यक्ष टीकाराम खड्कास“ग युगबो धकर्मी जे .एन.सागरले गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षे प यहा“ प्रस् तुत गरिएको छ । –सम्पादक
वाम ध्रुवीकरणलाई कसरी लिनुभएको छ ?
ने पालको राजनीतिमा कम्युनिष्ट पार्टी र प्रजातान्त्रिक शक्तिहरुले राणाकालीन सत्ता र पञ्चायतकालीन सत्ताका विरुद्धमा संघर्ष गरे को इतिहास छ । आन्दो लनको लक्ष के थियो भने श्रमजीवी जनताको मुक्तिका निम्ति समाजवाद स् थापना गनेर् र जनवाद, समाजवाद र साम्यवादसम्म पुग्ने एउटा अभीष्ट थियो  । किसानहरुलाई जमिनको मालिक बनाउने , बे रो जगारहरुलाई रो जगारी दिने , आर्थिक समृद्धिको माध्यमबाट ने पाललाई समृद्ध बनाउने उद्दे श्यका साथ ने पालमा कम्युनिष्ट पार्टी गठन भएको हो  । अकोर् तिर पू“जीवादी धारको प्रतिनिधित्व गदैर् ने पाली कांग्रे सलगायतका पार्टीहरु निर्माण भएका थिए । यी दुईवटै पार्टीले मुलुकको प्रजातान्त्रिक आन्दो लनमा महत्वपूर्ण भूमिका खे ले को कुरा इतिहास साक्षी छ । उनीहरुकै यो गदानले राणाकालीन सत्ता धराशायी भयो र पञ्चायती शासन व्यवस् था अन्त्य भयो  । तर ने पालमा २०४७ को जनआन्दो लनपछि संवै धानिक राजतन्त्रसहितको प्रजातन्त्रको वकालत गरे र उदारवादी राजनीतिक विचारधाराको प्रतिनिधित्व गनेर् र राजा र कांग्रे स मिले र जानुपर्छ भन्ने कांग्रे स लो कतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्तिको आन्दो लनमा सहभागी भयो  । यी ने पाली जनताका साझा मुद्दा थिए । सामन्तवादको प्रतीकको रुपमा रहे को राजसंस् था, राणा र पञ्चायती शासनसमे त शान्तिपूर्णरुपमा व्यवस् थापन हुन पुग्यो  । जसबाट ने पालमा पू“जीवाद स् थापना भयो र सामन्तवादको अन्त्य भएको छ । राजनीतिक संघर्ष एक हिसाबले टुंगो लागिसके को छ । अब मुलुकको समृद्धिका निम्ति आर्थिक समृद्धि नै हो  । त्यो समृद्धिका लागि बाम एकता अनिवार्य छ ।
स् थानीय तह निर्वाचनलाई नै हे नेर् हो भने पनि बाम जनमत धे रै छ । अब प्रदे श र संघको निर्वाचनको तयारी ह“ुदै छ । स् थानीय सरकार, प्रदे श सरकार र संघीय सरकार बनाउने चरणमा हामी हो मिएका छौ ं । स् थानीय सरकार निर्माण गरिसके का छौ ं । स् थानीय तहमा कांग्रे स–माओ वादी, एमाले –माओ वादी, कांग्रे स–एमाले बीच पनि चुनावी तालमे ल भयो  । त्यो चुनाव जित्नका लागि मात्रै थियो भयो । तर त्यसले समाजको अधिरचना गर्न सक्दै न । समाजको कार्यदिशालाई सुस् पष्ट गर्न सक्दै न । समाजको कार्यदिशालाई सुस् पष्ट गर्दा विचारधारात्मक संघर्षको आवश्यकता पर्दछ । अहिले विचारधारात्मक कार्यदिशा के हो भने ने पालको आर्थिक समृद्धि हु“दै समाजवाद या उदार पू“जीवादी व्यवस् थाको पक्षधरता यी दुईवटाबीचको प्रतिस् पर्धा हो  । यसको आवश्यकता छ । दुबै खाले प्रतिस् पर्धाका बीचमा समृद्ध समाजवादका पक्षधरहरु व्यापकरुपमा अगाडि बढ्ने छन् र यथास् िथतिवादी राजनीतिक संस् कृतिको पक्षपो षण गनेर् उदारवादी, पू“जीवादी राजनीतिको पक्षपो षण गनेर् राजनीतिक शक्तिहरुबीच प्रतिस् पर्धा हुने छ । प्रदे श र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा यसका बीचको मतान्तरलाई जनताको बीचमा लिएर जाने छौ ं । ने कपा एमाले को ने तृत्वमा सम्पूर्ण बामपन्थी शक्तिहरु यसरी नै अगाडि बढ्ने छौ ं । हामीले मुलुकमा समाजवाद स् थापना गर्नका निम्ति चुनावी घो षणापत्रका साथसाथै हाम्रो वर्तमान कार्यदिशा बन्ने छ । यो कार्यदिशाका पक्षधरहरु एउटा धु्रवमा संगठित हुने छन् र त्यसको विपक्षमा लाग्ने हरु अकोर् धु्रवतिर लाग्ने छन् । यो समयको माग हो  । यो कुनै आकस् िमक हो इन । अब उपभो क्तावादी चिन्तनका हिसाबले वा सीट आर्जन गनेर् हिसाबले यही यथास् िथतिवादी समाजमा ढलीमली गरे र जीविको पार्जन गनेर् कुराले मात्रै निकास हु“दै न । मुलुकका ठूला–ठूला आन्दो लनहरुबाट गणतन्त्र प्राप्त गरिएको छ । यसले समाजवादी गणतन्त्रमा प्रवे श गरे र साम्यवादी गणतन्त्रमा जाने उद्दे श्य भएका सबै कम्युनिष्ट पार्टीहरु एकठाउ“मा उभिनै पर्छ । ढिलो वा चा“डो सबै कम्युनिष्ट पार्टीहरु एउटै मो र्चामा उभिने छन् । यतिबे ला ने कपा एमाले र माओ वादी के न्द्रका बीचमा चुनावी तालमे ल शुरु भएको छ । यो सुखद पक्ष हो  ।
तालमे ल र एकतामै सामे ल हुन आएको नया“शक्ति सहमतिको महिना नबित्दै छुट्टियो त ?
हो वामपन्थी हांै भन्ने तर अवसरवादी तप्काका मान्छे हरु मै ले सिट प्राप्त गरे न भने र फे रि फर्किएका छन् । यतिमात्रै हो र कांग्रे स वा अन्य गै रवामपन्थी शक्तिस“ग गठजो डको कुरा पनि आएको छ । त्यस् ता अवसरवादीहरु राजनीतिकरुपमा अन्ततः समाप्त भएर जाने छन् । उनीहरुमा रहे को माक्र्सवाद, ले निनवादी दृष्टिको ण समाप्त भएर जाने छ र उनीहरु र कांग्रे सबीच विचारमा एकरुपता हुने छ । उनीहरु त्यही दिशामा जाने छन् । हामी माक्र्सवादी रहे नौ ं भने र घो षणा गनेर् छन् ।
वाम ध्रुवीकरणबारे दाङका ने ता, कार्यकर्ताहरुको प्रतिक्रिया के छ ?
पहिलो कुरा हिजो स् थानीय तहको निर्वाचनकै वे ला ने कपा माओ वादी के न्द्रस“ग चुनावी तालमे ल गनेर् प्रस् ताव हामीले राखे का थियौ ं । वस् तुगत आधारको विश्ले षण गरे र वस् तुगत अवस् थामै टे के र निर्णय गरौ ं र चुनावी तालमे ल गरौ ं । हामी एक हुन अनिवार्य छ । हामी एक भएनौ ं भने अपे क्षाकृत नतिजा ल्याउन सक्दै नौ ं । सरकारको मामिलामा तपाइ“हरुको फरक दृष्टिको ण हो ला । कांग्रे सस“ग तपाइ“हरुको संयुक्त सरकार छ । तर जिल्लागत अवस् था हे नेर् हो भने वामपन्थी मतदाताहरु गै रवामपन्थी मतदाताहरुका बीचमा कित्ताकाट छ । वामपन्थीले गै रवामपन्थी र गै रवामपन्थीले वामपन्थीलाई भो ट हाले को दे खिदै न । कहींकतै भए त्यो नौ लो नै हुने छ । त्यसै ले वामपन्थी शक्तिबीच तालमे ल गरे र जा“दा दाङमा सबै तह जित्न सकिन्छ भन्ने हामीले भने कै हो  । माओ वादी के न्द्रको के न्द्रीय राजनीतिक पो लिसीका कारणले जिल्लामा तालमे ल सम्भव भएन । जसका कारण एमाले ले छवटा स् थानीय तह जिते पनि दश तह जित्न सकिएन । कमजो रीहरु सधै बो के र हि“ड्नु हु“दै न । जहा“ कमजो री हुन्छ त्यहीं छो डे र जानुपर्छ । तर राम्रा पक्षलाई अगाडि बढाउने हो  । त्यही कुरालाई बो के र हामी जिल्ला समन्वय समितिमा तालमे ल ग¥यौ ं र बहुमत सदस् यसहित वामशक्तिको ने तृत्व स् थापित भएको छ । एउटा अभ्यास हामीले गरिसके का छौ ं । यसर्थ पनि अब जिल्लामा चुनावी तालमे ल गर्न सकिदै न वा कुनै बाधा आउ“छ कि भन्ने कुरा हु“दै न । दो स्रो कुरा दाङबाट प्रतिनिधिसभा चुनावमा एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली, स् थायी कमिटी सदस् य शंकर पो ख्रे ल र माओ वादी के न्द्रका ने ता एवं उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई दङाली जनताले अनुमो दन गर्न चाहन्छन् र नया“ पिढीका अन्य साथीहरुलाई पनि अनुमो दन गर्न चाहन्छन् । त्यसै ले हामीले उम्मे दवारका लागि दुबै दलबाट प्रस् ताव गरिसके का छौ ं । दाङ र पा“च नं. प्रदे शलाई बलियो बनाउन यी उम्मे दवारहरुलाई अनुमो दन गर्न जनता आतुर छन् । अहिले पनि दाङमा वामपन्थी मतदाता पहिलो स् थानमै छन् । यो जनमतलाई संस् थागत गदैर् प्रदे शका छ र प्रतिनिधिसभाका तीन गरी नौ वटै सिटमा वामपन्थीले जित्ने सुनिश्चित भएका कारणले वाम ध्रुवीकरणको शुरुवात गरिएको हो  । पार्टी के न्द्रले गनेर् निर्णयलाई शिरो पर गरी निर्वाचनपछि हुने पार्टी एकतालाई थप मजबुत बनाउने गरी हाम्रा साझा उम्मे दवारहरुलाई विजयी बनाउने छौ ं । एमाले सो ही अनुसार चल्ने छ र माओ वादी के न्द्र पनि सो ही अनुसार चल्ने छ । हामी वाम एकतालाई निष्कर्षमा पु¥याउनका लागि के न्द्रबाट आउने निर्णयलाई कार्यान्वयन गरे र जान आतुर छौ ं ।
चुनाव जित्नका लागि आतुर हुनुहुन्छ ?
बाहिर हे र्दा आगामी प्रदे शसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन जित्नका लागि मात्रै जस् तो बुझे का हो लान् कसै ले  । मै ले माथि पनि भने ं कम्युनिष्टहरुको अभीष्ट पूरा गनेर् कामको शुरुवात पनि हो यो  । चुनावबाटै हामीले दाङबाट नौ जना प्रतिनिधि पठाउने छांै  । स् थानीय तहको ने तृत्व हामीले गरिसके का छौ ं । अब प्रदे श र संघको ने तृत्व गनेर् अवसर आउ“दै छ । जसले जनताले चाहे अनुसार संविधान संशो धन र जनताका समस् या समाधानका लागि काम गनेर् वातावरण बन्ने छ । मलाई लाग्छ यो तालमे ल र एकताले सबै उम्मे दवार बन्न पाउनुहुने छै न आम ने पालीमाझ प्रशस् त सम्भावनाका बाटा खुल्ने छन् । मुलुकको बागडो र नै वामपन्थी शक्तिको हातमा आउने छ । यस् तो महत्वपूर्ण राजनीतिक क्षणलाई एमाले उपयो ग गर्न चाहन्छ । त्यहा“ व्यक्तिका इच्छा चाहना ठूलो कुरा मानिने छै न ।
चुनाव लागिसके को छ, तयारी के भइरहे को छ ?
हामी अहिले के न्द्रकै निर्णय पखेर् र बसे को अवस् था छ । के ही दिनभित्रै भे ला, प्रशिक्षण, सभा तथा भे टघाट गनेर् गरी कार्यक्रम तय गदैर् छौ ं । तिहारपछि ती कार्यक्रम आउने छन् । उम्मे दवार परिचयात्मक कार्यक्रम नै हुने छ । त्यसै गरी निर्वाचनका लागि चाहिने आवश्यक तयारी पनि भइरहे को छ । सामग्री तयार गनेर् र जनताका प्रतिनिधिहरुलाई लगे र घरदै लो गनेर् हाम्रो लक्ष छ । हामी कार्तिक र मंसिरमा उम्मे दवारहरुलाई लगे र घरदै लो मा जाने छांै  । यो पालि राष्ट्रियताको संरक्षण, संवद्र्धन, समृद्ध समाजवाद निर्माण गनेर् कुरा, कुनै पनि खालका हस् तक्षे पहरुलाई मुक्त गरे र सार्वभौ म स् वतन्त्र राष्ट्र ने पाललाई स् थापित गनेर् कुरा चुनावी एजे ण्डाका रुपमा लगिने छ । त्यस् तै जनजीविकाका सवाल हाम्रा मुद्दा हुने छन् । यी सबै मुद्दाहरुलाई लिएर हामी जनतामाझ जाने छांै  ।
सम्भावित उम्मे दवार को हुन्, के ही संके त छ ?
मै ले माथि नामै लिएर भनिसके ं दाङको विकास र प्रदे शको विकासका लागि आवश्यक ने तृत्व भने कै युवराज ज्ञवाली, शंकर पो ख्रे ल र कृष्णबहादुर महरा हुनुहुन्छ । उहा“हरु नै हो उम्मे दवार । तर को कहा“बाट लड्ने भन्ने कुराको निक्यौर् ल दुबै पार्टीका के न्द्रले निर्णय गनेर् छन् । हामी सो ही अनुसार उहा“हरुलाई विजयी गराउन लाग्ने छौ ं । उहा“हरुस“गै अन्य पनि हुनुहुन्छ । थुप्रै उम्मे दवारका आकांक्षीहरु हुनुहुन्छ । हाम्रो पार्टीबाट पनि हामीले संघ र प्रदे शका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिक उम्मे दवारहरु सिफारिस गरे का छौ ं । उहा“हरु सबै सम्भावित उम्मे दवार हो  । तर सिफारिस भएका सबै उम्मे दवार हुन पाउ“दै नन् । दुबै पार्टीका के न्द्रले निर्णय गरे र पठाउने उम्मे दवार नै दाङका हाम्रा उम्मे दवार हुने छन् । दुबै पार्टीले गनेर् निर्णय अप्रिय हुने छै न ।
पार्टीमा यो गदान भएकाहरुलाई पाखा लगाइयो भन्ने सुनिन्छ त ?
त्यस् तो त भएको छै न । हामीले सिफारिस गरे का सबै उम्मे दवारहरु पार्टी, समाजमा यो गदान गरे कै हुनुहुन्छ । को ही प्रत्यक्षमा को ही समानुपातिकमा सिफारिस गरिएको छ । मलाई को ही मान्छे छुटे जस् तो लाग्दै न । पार्टीका अग्रज, अनुज सबै को नाम सिफारिस गरे का छौ ं । भूगो लमा नया“ साथीहरुलाई पनि सिफारिस गरिएको छ । पार्टी भने को नया“ पुरानाहरुको मिश्रित निकाय हो  ।
पार्टी प्रवे श गरे कै दिनदे खि टिके टका लागि सिफारिस गर्दा चप्पल फटाउने हरुलाई अन्याय भएन र ?
त्यस् तो हामी हुन दिदै नांै  । पार्टीका लागि यो गदान गरे का र जनताका बीचमा स् थापित भएकाहरुलाई हामीले उम्मे दवार बनाउने है सियतमै सिफारिस गरे का छौ ं । तर आउने चुनाव सामान्य चुनाव हो इन । त्यो चुनाव पार्टी कार्यकर्ताहरुले मात्रै जित्न सकिदै न । कार्यकर्ताहरुले मात्रै भो ट हाले र जित्न सकिने भए त तपाइ“ले भने जस् तो नया“लाई यति छिटै अवसर भन्ने स् वाभाविक प्रश्न हो ला । तर चुनाव जित्न त जनताको मत चाहिन्छ । कार्यकर्ताहरुको बलमा जनताको समर्थन भए मात्रै चुनाव जित्न सकिन्छ । त्यसै ले जनताको समर्थन बटुल्नका लागि पनि नया“हरुलाई सम्मान र अवसर त दिनुप¥यो नि । पुराना भने र अड्डी कस् ने नया“हरुलाई बसीखान नदिने हो भने त कसरी पार्टी आम जनताको पार्टी बन्ला त ? तसर्थ पुरानाहरुलाई सम्मान नया“हरुलाई स् वागत गनेर् काम गर्नुपर्छ र नया“हरुलाई क्षमताअनुसारको भूमिका पनि दिन सकियो
भने पार्टी चल्छ र चुनाव जित्न सकिन्छ । यसलाई कुनै
अनौ ठो मान्नुपदैर् न ।
दाङका छ तहमा जित्ने एमाले उम्मे दवारहरु विजयी भएको सय दिन बित्यो । कामको मूल्यांकन गर्नुभो  ?
हो  । दाङका १० तहमध्ये छ तहमा हाम्रो पार्टीका उम्मे दवारहरु विजयी हुनुभएको छ । पार्टीले निर्वाचित प्रतिनिधिहरुस“ग कामको समीक्षा गनेर् तयारी गरिरहे को छ । तिहारपछि त्यो काम हुन्छ ।
तर पनि एमाले को टिकट लिएर जनप्रतिनिधि हुनुभएका प्रतिनिधिहरुले अन्य दिनभन्दा निर्वाचितपछिका सय दिनलाई अधिकतम उपयो ग गर्नुभएको छ । धे रै नया“ कामको शुरुवात भएका छन्,
दाङलाई कसरी समृद्ध बनाउन सकिन्छ भने र यो जना बनाउन थाल्नुभएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय एयरपो र्ट निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययनको काम, खाने पानी, बिजुली, सडक निर्माणका कामलाई प्राथमिकतामा राखे र काम थाल्नुभएको छ । शिक्षा, स् वास् थ्यजस् ता क्षे त्रमा संवे दनशील भएर लाग्नुभएको छ । तुलसीपुरमा सुत्के री भत्ता, रक्त सञ्चार के न्द्र स् थापनालगायतका नमूना काम भएका छन् । घो राहीमा बृद्धबृद्धाहरुलाई घर–घरमै चिकित्सक से वा प्रदान गरिएको छ । त्यस् तै लमही, बबई, गढवालगायतका गाउ“पालिकामा पनि यावत नमूना कामको शुरुवात भएको छ ।
अन्त्यमा, छुटे का के ही ?
ने पालीहरुका चाडहरु हाम्रो घर आ“गनमा भित्रिसके का छन् । दीपावली शुरु भइसके को छ, छठ आउ“दै छ । यी चाडपर्वको अवसरमा सम्पूर्ण दाङबासीहरुमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र खासगरी आउ“दै गरे को प्रदे श र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, सहज र भयरहित हिसाबले सम्पन्न गर्न आम ने पाली एकजुट हौ ं । दलीय स् वच्छ प्रतिस् पर्धाका लागि सबै तयार हुनुपर्छ । सत्ताको आडमा विपक्षीहरुलाई निषे ध गनेर् काम विगतमा भएका छन् । त्यस् ता गतिविधिहरु हुन नदिन सबै चनाखो भएर लागौ ं ।
Previous: बाल विवाह रोक्ने प्रतिबद्धता
Next: असुरक्षित वै दे शिक रो जगार